(Tsy) Ho Lasa Bodista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2016 7:24 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Español, Français, Italiano, English
Ny Tempoly Raikoji, tempoly iray Jodo Shin ao Matsushima-cho, Tsuruga (Prefektioran'i Fukui ). Sary an'i Nevin Thompson.
Fotoana fohy taorian'ny nahaterahan'ny zanako lahimatoa, ny Septambra 2002, nandohalika nanoloana ny sarivongana iray an'i Yakushi Nyorai, ilay bodhisattva-n'ny fanasitranana aho. Nanao fanatitra ve aho tamin'izany, vavaka sa fangatahana ??
Izahay dia monina ao amin'ny prefektioran'i Fukui, amin'ny morontsirak'i Japàna, ao avaratr'i Kyoto. Andro vitsy taorian'ny nahaterahany, nanavy be ny zanakay, avy eo tratry ny septicémie (otrikaretina naelin'ny rà hanenika ny vatana), aretina henjana manjo ny rà. Tsy dia nanome fanantenana loatra ny toeram-pitsaboana. Rehefa hitako ilay mpitsabo nihazakazaka nitondra ilay zanakay mba hahazo izay fitsaboana maika sahaza ho azy, tsapako fa tsy betsaka intsony ny fanantenana (sitrana ny zanakay, efa 14 taona izy izao ary tsy narary intsony taty aoriana).
Araka izany, nipetraka teo ivelan'ny hopitaly aho, teo akaikin'ireo sarivongana enina maneho an'i Jizô, bodhisattva mpiahy ny ankizy ary mpitaridàlana ny maty hankany amin'ny tontolo ambanin'ny tany, sambany teo amin'ny fiainana naha-olondehibe ahy aho no nanapaka hevitra ny hivavaka ka hangataka fanampiana.
“…nipetraka teo ivelan'ny hopitaly aho, teo akaikin'ireo sarivongana enina maneho an'i Jizô, bodhisattva mpiahy ny ankizy ary mpitari-dàlana ny maty hankany amin'ny tontolo ambanin'ny tany, sambany teo amin'ny fiainana naha-olondehibe ahy aho no nanapaka hevitra ny hivavaka ka hangataka fanampiana..”
Nandeha tany Tada-ji aho, tempoly iray eny an-tampon'ny havoana iray rakotra hazo tsy lavitry ny hopitaly, ao amin'ny vohitra kely iray fonenan'ireo mpanjonon'i Obama. Mangatsiatsiaka sy maloka ny hondo, na ny varavarambe fidirana, taorian'ny namakivakiana hainandro migainan'ny lohataona rehefa nivoaka ny fiarako aho. Toy ireo tempoly bodista rehetra ao Japàna, somary zara raha mazava ny ao anatiny ary manentoento ny fofona emboka manitra. Narahan'ilay abbé, nanaisotra ny kiraroko aho ary niditra nanitsaka ilay gorodona maneno manoloana ny alitara, izay rakotra karipetra maitso efa vasobasoka.
Sarivongana maneho an'i « Yakushi Nyorai, ilay mpanasitrana », manana haavo roa metatra no anton'ny fanomezana voninahitra ao Tada-ji, efa ho roanjato sy arivo taona no teo. Efa talohan'ny vanimpotoanan'ny fitsaboana maoderna no teo ilay sarivongana, tamin'ny vanim-potoana nitondran'ny aretina avy hatrany dia any amin'ny fahafatesana na aminà fahasembanana mandra-maty..
Tamin'ny fotoana nanorenana ny tempoly sy nisokirana ilay sarivongana, mbola nisy dimanjato taona talohan'ny Dogen nitondra ho ao Japàna ny fandinihantena Zen sy ny fotokevitra « famafàna ny amin'ny tena » . Talohan'ny vanimpotoana nisian'ny soratra, fony ny bodisma mbola voatokana ho anà vondron'olona vitsivitsy nanana tombontsoa manokana nahay namaky teny tao Japàna, niantehitra tamin'i Yakushi Nyorai, Jizô sy ireo bodhisattvas hafa ny olona rehetra mba hahazo fanampiana.
Toy ny nataoko nandritra izany fotoana izany.
Vao jerena voalohany, dia bolongan-kazo fotsiny ilay sarivongan'i Yakushi Nyorai ao Tada-ji, tsy misy haingony, ary zara raha mahazo ny tara-pahazavan'ny hondo, somary miendrika sikotra kitoatoa. Nomeko vola ho toy ny fanomezan-kasina azy ilay abbé izay nandova ny fitantanana ny tempoly.
Ny hazary Yakushi Nyorai (Bhaisajyaguru) ao amin'ny tempoly Tada-ji, ao Obama. Sary an'i Nevin Thompson
Nandohalika teo amin'ilay sarivongana aho, ary ilay abbé fotsy volo kosa, nitanisa darani iray, mantra iray mifandray amin'i Yakushi Nyorai. Tafiditra ao anatin'ny asan'ny abbé izany, nitondra nitety ny toerana izy rehefa tonga tao an-tempoly ilay fiarabe feno mpizahatany, nikarakara ireo fandevenana sy nitanisa vavaka ho an'ireo mpitsidika mandeha irery toa ahy. Tsy nisy fantatro izay nambarany, ireo endrika tsy tsara voatra teny amin'ilay sarivongana voasikotra tamin'ny hazo efa ho roanjato sy arivo taona no nifantohako.
Lehibe tany amin'ny firenena laika, Kanadà nandritry ny andian-taona 70 aho, tsy nahazatra ahy ny fotokevitra mirona amin'ny fivavahana. Tsy haiko akory na dia ny fomba sy ny antony ivavahan'ny olona iray amin'ny bodhisattva iray aza. « tsy misy andriamanitra ao amin'ny finoana bodisma », raha ny novakiako. Koa nahoana no hangataka fanampiana aminà sarivongana ??
Efa im-betsaka aho no nandeha tany Tada-ji sy ireo tempoly maro hafa ao Obama nandritry ny folo taona teo aloha laniko tany ambaniviohitra Japoney. Na dia mazàna potiky ny ady sy ny loza voajanahary aza ireo rakitry ny ela tao Japàna, ny lovan'ny kolontsaina mitoka-monina ananan'i Obama dia nitoetra tsy voakitika efa ho dimanjato sy arivo taona ny ankamaroany. Niniana napetraka tany Obama ny tempoly maro sy ireo raki-tsarobidin'izy ireny, dia an-tongotra andro roa miala avy eo Kyoto, mba hiarovana azy ireny amin'ny ady izay matetika namely ireo vohitra fahiny nisy ny amperora. Nanome ahy fotoana iray tsara fanararaotra ireo tempoly tao Obama mba hianarana bebe kokoa momba ny tantaran'ny taokanto. Nitondra ahy haniry “hamantatra ny tantaran'ny bodisma” ireo tantara tany ambadiky ny fotodrafitrasa, ireo toerana masina sy ireo sisan-taolan'olomasina hitako tany.
Kanefa na dia nonina teny akaikin'ireo tempoly sasany tao Obana sy tao Kyoto aza, hitako fa tsy mora ny mianatra ny tantaran'ny bodisma. « Ahoana no maha-lasa ny olona iray ho bodista ? », hoy aho manontany matetika ireo olona izay, heveriko, ho afaka mamaly io fanontaniana io, toy ireo profesora aminà lisea izay nampianarako ary mitantana tempolim-pianakaviana, mandritry ny faran'ny herinandro na ny fotoana fialàna sasatra. Rehefa napetrako tamin'izy ireo io fanontaniana io, toy ny adàla no fijerin-dry zareo ahy. « Maninona ianao no te-ho lasa bodista? » hoy izy ireo nanontany ahy isaky ny mihetsika. « Ianao aza tsy Japoney akory! »
« Rehefa napetrako tamin'izy ireo io fanontaniana io, toy ny adàla no fijerin-dry zareo ahy. « Maninona ianao no te-ho lasa bodista? » hoy izy ireo nanontany ahy isaky ny mihetsika. « Ianao aza tsy Japoney akory! » »
Tsy dia nisy loatra fomba hafa nahafahana nianatra. Amin'ny ankapobeny, ireo fiantso ny bodista efa nahazatra dia tsy misy asany rehefa alahady. Tsy misy ny sekoly alahady, na zavatra hafa miendrikendrika baiboly mba azon'ny Japoney ianteherana hianarana ireo soratra masina.
Kanefa, toa misy fomba fanao arahana ao Japàna mba ho « fampiharana ny bodisma.» Ireo fandevenana sy ireo asa fahatsiarovana fanao isantaona dia mizotra manaraka fitsipika ara-dalàna sy hentitra. Mitsidika fasana ny fianakaviana rehefa higan, “équinoxe” rehefa lohataona sy fahavaratra. Nahita aza aho ramatoa iray niankohoka teo anoloan'ny sarivongana goavana iray maneho an'i Yakushi Nyorai tao amin'ny Mozeam-pirenena ho an'ny taokanto ao Tokyo, nindramin'ilay mozea tamin'ny Daigo-ji niaviany. Saingy tsy nisy olona afaka nilaza tamiko ny fomba « ahatongavana ho » bodista.
Avy eo, tamin'ny kisendrasendra, nahita tampoka aho boky iray miresaka fandinihantena zen. Raha nojerena dia hita fa io boky io dia nosoratan'ilay abbé tao Hosshin-ji, monasitery Zen kely iray ao Obama (ny prefektioran'i Fukui koa dia mampiantrano ny Eihei-ji, iray amin'ireo toby lehibe Zen ao Japàna), ary taty aoriana dia nadikan'i Daigaku Rumme, Amerikàna iray moanina bodista niaina tao Hosshin-ji nandritry ny telopolo taona. Niantso azy an-telefaona aho ary lasa mpinamana izahay.
Ny fanontaniako voalohany ho an'i Daigaku dia hoe : « Boky toy inona no tokony hovakiako mba hahafantarana misimisy kokoa momba ny bodisma ? » Ny valiny : mety hampidi-doza ny famakiana boky mba hianarana momba ny bodisma. Ny mianatra mipetraka no tena natorony aza, ary ny niafaràny, nandany herinandro iray aho nandinihana ny tena nipetraka tany aminà toeram-pisindàna Zen iray tao Hosshin-ji ao Obama, niaraka taminà laika vitsivitsy.
Ny fombandrazana Zen, « manadino ilay izy keliny’ ary mifoha na voamarina amin'ny zavatra rehetra », dia tena zavatra nahasarika be ahy. Ny fomba fijery Zen dia manilika izay fampianarana rehetra mifanohitra amin'ireo sekoly bodista isankarazany misy ny olona ao Japàna. Ny fifohazana dia tsy inona fa ny fipetrahana sy fifohana rivotra ao anaty fifantohan-tsaina. Afaka atao aza ny manatratra ny fifohazana eo am-panasàna lovia.
Ary na dia vao taona iray na roa monja taorian'ny nihaonako tamin'i Daigaku aza, efa nandohalika sahady teo alohan'ny sarivongan'i Yakushi Nyorai aho, nikaroka tamin'ny fomba rehetra izay hahazoako fanampiana ho an-janako lahy.
Farany dia nanonona ny mantra avy aminy ilay pretra tao an-tempoly ary namarana ny fotoana tamin'ny fanetsiketsehana ny haraegushi iray, hazo mitsatoka noravahana rambon-taratasy, teo ambonin'ny lohako mba ho fanadiovana ahy, avy eo nanolotra ahy hazary kely iray miloko volom-bolamena maneho an'i Yakushi Nyorai teny ampiverenana ho any amin'ny fiarako.
Tsy araka izay nandrasana, sitrana tsy nisy septicémie ny zanako lahy andro vitsy monja taorian'ny nitsidihako ny tempoly. Nanampy ve ny nitsidihako ny tempoly tao Tada-ji sy Yakushi Nyorai ? Sarotra lazaina, saingy tahirizinay mandrakariva ato amponay ireo mpitsabo sy ny mpiasa rehetra manana ny fahaizany ao Obama. Nataonay tsara toerana ihany koa ilay hazary.